सेयर लगानीकर्तालाई राहत, ब्रोकर कमिसन ३३%ले घटेकाे जानकारी – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > सेयर लगानीकर्तालाई राहत, ब्रोकर कमिसन ३३%ले घटेकाे जानकारी
सेयर लगानीकर्तालाई राहत, ब्रोकर कमिसन ३३%ले घटेकाे जानकारी
१० पुष २०७७, शुक्रबार १८:१६ bampijhyala
१० पुष, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । आज ४७९७६ कारोबारमा ९८६०५३६ कित्ता सेयरको किनबेच भई ५३६९०४६३२१.७२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएर बजार बन्द भएको छ। नेप्सेमा सूचिकृत कूल २०४ कम्पनीको सेयर किनबेच भएको छ ।
बजार बन्द हुन एक घण्टा बाँकी छँदा अहिलेसम्म ३२६८० कारोबारमा ३४७८४०८३८४.४२ रुपैयाँ बराबरका ६४३४०९९ कित्ता सेयरको किनबेच भइसकेको छ। नेप्सेमा सूचिकृत कूल १९८ कम्पनीको सेयर किनबेच भएको हो। यतिबेला नेप्से इन्डेक्स २०३४.८ मा रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कसिमन घटाएको छ। पहिलेदेखि नै सेयर ब्रोकरहरूले ब्रोकर कमिशन घटाउन माग गर्दै आएका थिए।
ब्रोर्डले ब्रोकर कमिसन ३३% ले घटाएको जानकारी दिएको छ। कमिसन घटेपछि यसको सकारात्मक असर सेयर बजारमा पर्नेछ।
निरन्तर उछाल आएको सेयर बजारमा राजनीतिक घटनाक्रमले केही अलमल देखिए पनि लगानीकर्तामा उत्साह घटेको छैन।
पुरानो रेकर्ड तोड्दै सेयर बजार सूचक दुई हजार क्रस गरिसकेको छ। बुलिस ट्रेन्डमा रहेको सेयर बजारको सकारात्मक वातावरण राजनीतिक घटनाक्रमले नबिथोलिने विश्‍वासमा लगानीकर्ता देखिन्छन्।
पुँजी बजारप्रति अनुदार देखिएको तत्कालीन अर्थमन्‍त्री युवराज खतिवडाको बहिर्गमन र नयाँ अर्थमन्‍त्री विष्णु पौडेलको नियुक्तिपछि सेयर बजारमा बेग्लै माहोल सुरु भएको हो।
गत साउनको पहिलो हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले प्रदान गरेको सहुलियत र राहतले लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्। त्यसपछि नै सेयर बजारमा सुधारको क्रम सुरु भएको थियो।
कति घट्यो ब्रोकर कमिसन ?
लगानीकर्ताले यसअघि ५० हजार सम्मको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत कमिसन तिर्नुपर्नेमा अब ०.४०२ प्रतिशतले तिरे हुने भएकोछ। ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.५५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेमा अब ०.३६८५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने छ।
हाल ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको कारोबारमा ०.५० प्रतिशत र २० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबारमा ०.४५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई घटाएर सहज बनाइएको छ। अबदेखि ५ लाख देखि २० लाख सम्मको लागि ०.३३५ प्रतिशत र २० लाखदेखि करोडसम्मको कारोबारमा ०.३०१५ प्रतिशत तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाण्डौंको मुटुमा रहेको धरहराको २० तला तयार
५ जना मन्त्री नियुक्त सपथ आज ७ बजे
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै १० पुष २०७७, शुक्रबार १८:१६
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी १० पुष २०७७, शुक्रबार १८:१६
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु १० पुष २०७७, शुक्रबार १८:१६
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? १० पुष २०७७, शुक्रबार १८:१६
हजुरको आजको दिन, ०७८ असार १ गते, मंगलवार, १५ जुन २०२१। १० पुष २०७७, शुक्रबार १८:१६